မွငျးကြား လို လူတှမြေားလာတဲ့ ခတျေ – Shwe Naung
မွငျးကြား လို လူတှမြေားလာတဲ့ ခတျေ
ပငျြးပငျြးရှိတာနဲ့ TV မှာ NGC Wild လိုငျးဖှငျ့ပွီးတိရိစ်ဆာနျတှေ အမဲလိုကျတာကွညျ့နလေိုကျတယျ။ ခွငေ်ျသ့တဈကောငျက မွငျးကြားတဈအုပျကို အမဲလိုကျနတော .. မွငျးကြားတှပွေေးတယျ။ လှညျ့ပတျပွေးကွတယျ..ဝရုနျးသုနျးကားပေါ့..ဖုနျတှတေထောငျးထောငျး ထ အောငျအသကျဘေးကလှတျဖို့ ရှိသမြှအားကုနျထုတျပွီး ပွေးကွတာ..။
ဒါပမေဲ့သူတို့ထကျပိုသနျမာတဲ့ ခင်ျသွ့ကွီးက နောကျဆုံးတော့လညျး မွငျးကြားတဈကောငျကိုလှားခနဲ ခုနျအုပျပွီး နရောမှာတငျ ကိုကျစားလိုကျတယျ။ ခွငေ်ျသ့က မွငျးကြားတဈကောငျကိုလဲ မိသှားရော ခုနက ပွေးလှားနကွေတဲ့ မွငျးကြားတှေ ခကျြခွငျးရပျပွီး အဲ့ဒီနားမှာပဲ ပုံမှနျအတိုငျးမွကျပွနျစားနတေော့တာပဲ။
ခုနကပွေးလှားနကွေတာ သူတို့မဟုတျတဲ့အတိုငျး.. သူတို့မြိုးနှယျတဈကောငျကို သူတို့အနားတငျ ခွငေ်ျသ့ကွီးက စားနတောကို အမွီးလေးတခါခါနဲ့ အေးအေးအး လူလူနနေိုငျကွတယျ..။ နနေိုငျမှာပေါ့ ..တိရစ်ဆာနျကိုး..!
TV ကွညျ့နရေငျးနဲ့ ကိုယျတှလေူ့ဘောငျအသိုငျးအဝိုငျးထဲမှာလညျး ဒီမွငျးကြားစရိုကျမြိုးနဲ့လူတှရှေိနပေါလားလို့ အတှေးဝငျလာပွီး မခြိပွုံး ပွုံးမိတယျ…။
“ဟိုကောငျတော့ ကားခနဲ ပဲဟေ့..ဟဟ ဒီကောငျ ဒီလိုဖွဈတော့မှာ ကြုပျကကွိုသိသားပဲ.. ထားလိုကျဟလေူ့ သှားဝငျမပါနဲ့နျော.. ကိုယျ့အပူမပါဘူးဗြ။ ကိုယျ့ဟာကို နတေတျသလိုလေးသာနေ”
ဒီစကားမြိုးတှေ ပတျဝနျးကငျြမှာ မကွာခဏ ကွားလာရတယျ။ ကိုယျတိုငျ ဒါမှမဟုတျ ကိုယျ့မိသားစုအရေးမှမဟုတျရငျ သူမြားဘေးဒုက်ခရောကျနတောကို အေးရာအေးကွောငျး ကွညျ့နနေိုငျကွတဲ့ လူတှေ… လူတှေ…။ ခုနက မွငျးကြားလို လူတှေ အမြားကွီးရှိနကွေတယျ.. ဒီနရောမှာ လူတိုငျး ကွားဖူးတဲ့ပုံပွငျလေး ပွနျနှေးခငျြပါတယျ.။
တောထဲမှာ လူနှဈယောကျကို ဆငျရိုငျးကွီးကလိုကျတယျပေါ့.။ လူနှဈယောကျက ထှကျပွေးရတာပေါ့.. လူတဈယောကျကပွောတယျ.. ငါတို့ဆငျရိုငျးထကျ ပိုအပွေးသနျနိုငျ ပါ့မလား..
ဟိုလူကဖွတေယျ. “ဆငျရိုငျးထကျတော့ မသိဘူး.. ငါမငျးထကျတော့ ပိုအပွေးသနျတယျ”..တဲ့ သိပျကွောကျစရာကောငျးတဲ့ ပုံပွငျပါ.. မငျးထကျတော့ ငါပိုအပွေးသနျတယျ.. မငျးသခေငျြသပေါစေ.. ငါလှတျဖို့သာ အဓိကဆိုတဲ့ Mind set မြိုးကို (ဝမျးနညျးဖှယျကောငျးတာက) လူငယျတဈခြို့ဆီမှာပါ အမွဈတှယျ စပွုလာတာကို တှလေ့ာရတယျ..။
သကျငယျ မုဒိနျးမှုတှေ လူငယျနဲ့ မူးယဈဆေးဝါးပွဿနာတှအေစားအစာနဲ့ ဓာတုဆေးဝါး ဆိုငျရာရောဂါတှေ ကြှနျတျောတို့နိုငျငံထဲက ပွညျတှငျးစဈတှေ နိမျ့ကနြဆေဲ ပညာရေး ကနျြးမာရေး စနဈတှေ…
ကိုယျ့ဆီ ကိုယျ့မိသားစုဆီ တိုကျရိုကျမထိခိုကျသေးဘူးဆိုပွီး ကြှနျတျောတို့ အေးအေးလူလူ လုပျနကွေတယျ..။မနကျအိပျရာနိုး Breakfast စားပွီးရငျ
ငါအဆငျပွဖေို့အတှကျပဲ ရှငျသနျနကွေသူတှေ.သူမြားတှေ ဘာဖွဈဖွဈ ကိုယျနဲ့မဆိုငျဘူးလို့ ခံယူထားတဲ့ လူတှေ ခုနောကျပိုငျးမှာ အရမျးကို မြားလာတယျ..။ ဟိုးယခငျ ကြှနျတျောတို့နိုငျငံ မဆလ ခတျေက သိပျတှငျကယျြတဲ့ စကားတဈလုံးရှိခဲ့တယျ.
“ဦးရာလူ” တဲ့… (အဲ့ဒီစကားလုံးကို ယခုလကျရှိအခြိနျအထိ ကြှနျတျောမုနျးတယျ)
ဦးရာလူ…ဦးတဲ့သူ ရမယျနောကျကရြငျ မရဘူး.. အဲ့ဒီအခြိနျကအစစ အရာရာ ရှားပါးတဲ့ခတျေဆိုတော့ လူတှဟော ဦးရာလူ စနဈကွောငျ့ ကုနျတိုကျတှမှော သူမြားထကျကိုယျ ဦးအောငျတနျးစီပွီးဈေးဝယျရတယျ.။ နောကျကခြဲ့ရငျမရတော့ဘူး..သူမြားရသှားလိမျ့မယျ။
ကိုယျက သူ့ထကျဦးမှကို ရမယျဆိုတဲ့ အရိုးစှဲစိတျဓာတျ နဲ့ကွီးပွငျးလာရလို့မြား ကြှနျတျောတို့ မွနျမာနိုငျငံသားတှဟောပငျကိုယျက သိမျမှပေ့ါလကျြနဲ့ ကိုယျခငျြးစာတရားတှေ ပါးပါးလာကွပွီး ကြှနျတျောတို့မြိုးဆကျ လဲရောကျရော မွငျးကြားလိုလူမြိုးတှေ မြားပွားလာရသလား ရယျလို့ တဈခါတဈခါ လြှောကျတှေးမိတယျ..။
တိရစ်ဆာနျလိုမြိုး အရိုငျးစိတျတှေ စိုးမိုးအားကောငျးလာတဲ့ခတျေဆိုတော့ ကားခွငျး ပှတျမိယုံရုံနဲ့လညျး သံတုတျကိုငျပွီး ရိုကျကွနှကျကွ..လူခွငျး စကားမြားရုံလောကျ နဲ့လညျး သတျကွ ဖွတျကွနဲ့ပေါ့..။
ပလကျဖောငျးကဉျြးကဉျြးလေးထဲ လမျးလြောကျလာရငျး ထိပျတိုကျတှတေဲ့အခါ ကိုယျလေးယို့ပွီး ရှောငျပေးဖို့တောငျ ခဲယဉျးလာတဲ့အထိ လူတဈခြို့ အတ်တကွီးလာကွ တယျ.။ ကမ်ဘာတောငျ မီးမလောငျသေးပါဘဲနဲ့ မိတျဆှရေငျးတှအေခငျြးခငျြး ခနြငျးဖို့ဝနျမလေးကွတော့ဘူး..။
လူနဲ့တိရစ်ဆာနျကွားက ခွားနားခကျြတှေ တဖွညျးဖွညျးကဉျြးမွောငျးလာတာ တှေးကွညျ့ရငျ သိပျကွောကျဖို့ကောငျးပါတယျ။ ကိုယျ့ရငျထဲမှာလညျး တိရစ်ဆာနျတဈကောငျ အကောငျပေါကျနပွေီလားလို့ ကိုယျ့စိတျကိုယျ မကွာခဏ ပွနျဆနျးစဈကွညျ့မိတယျ။
တိရစ်ဆာနျ နဲ့ လူ ခွားနားခကျြကို ဘာ စံ ၊ ဘာပတေံ နဲ့ ခငျဗြားကတိုငျးမှာလဲလို့လာမေးရငျကြှနျတျောကတော့ ကိုယျခငျြးစာတရားဆိုတဲ့ ပတေံနဲ့ပဲ တိုငျးခငျြပါတယျ..
“ကိုယျရဲ့ ကာယကံ ဝစီကံ မနောကံတညျးဟူသော အကွောငျးတရားတှဟော သူတပါးအပျေါမှာ ထိခိုကျနဈနာ သှားစနေိုငျသလား?” ဆိုတဲ့ခံစားခကျြနဲ့
“သူ့နရောမှာ ကိုယျသာဆိုရငျ ကိုယျဘယျလို ဘယျလိုခံစားရလိမျ့မလဲ?” ဆိုတဲ့စိတျမြိုးပါ လူပီသဖို့ဆိုတာ သိပျအမြားကွီးမလိုပါဘူး။ ကိုယျခငျြးစာတတျဖို့လေးပါ ။
အဲ့စိတျဓါတျလေးမရှိရငျတော့အင်ျကြီဝတျထားပွီး အမွီးတနံ့နံ့နဲ့သှားနတေဲ့ မွငျးကြားတဈကောငျသို့သာ
ပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့ TV မှာ NGC Wild လိုင်းဖွင့်ပြီးတိရိစ္ဆာန်တွေ အမဲလိုက်တာကြည့်နေလိုက်တယ်။ ခြင်္သေ့တစ်ကောင်က မြင်းကျားတစ်အုပ်ကို အမဲလိုက်နေတာ .. မြင်းကျားတွေပြေးတယ်။ လှည့်ပတ်ပြေးကြတယ်..ဝရုန်းသုန်းကားပေါ့..ဖုန်တွေတထောင်းထောင်း ထ အောင်အသက်ဘေးကလွတ်ဖို့ ရှိသမျှအားကုန်ထုတ်ပြီး ပြေးကြတာ..။
ဒါပေမဲ့သူတို့ထက်ပိုသန်မာတဲ့ ခြင်္သ့ကြီးက နောက်ဆုံးတော့လည်း မြင်းကျားတစ်ကောင်ကိုလွှားခနဲ ခုန်အုပ်ပြီး နေရာမှာတင် ကိုက်စားလိုက်တယ်။ ခြင်္သေ့က မြင်းကျားတစ်ကောင်ကိုလဲ မိသွားရော ခုနက ပြေးလွှားနေကြတဲ့ မြင်းကျားတွေ ချက်ခြင်းရပ်ပြီး အဲ့ဒီနားမှာပဲ ပုံမှန်အတိုင်းမြက်ပြန်စားနေတော့တာပဲ။
ခုနကပြေးလွှားနေကြတာ သူတို့မဟုတ်တဲ့အတိုင်း.. သူတို့မျိုးနွယ်တစ်ကောင်ကို သူတို့အနားတင် ခြင်္သေ့ကြီးက စားနေတာကို အမြီးလေးတခါခါနဲ့ အေးအေးအး လူလူနေနိုင်ကြတယ်..။ နေနိုင်မှာပေါ့ ..တိရစ္ဆာန်ကိုး..!
TV ကြည့်နေရင်းနဲ့ ကိုယ်တွေလူ့ဘောင်အသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာလည်း ဒီမြင်းကျားစရိုက်မျိုးနဲ့လူတွေရှိနေပါလားလို့ အတွေးဝင်လာပြီး မချိပြုံး ပြုံးမိတယ်…။
“ဟိုကောင်တော့ ကားခနဲ ပဲဟေ့..ဟဟ ဒီကောင် ဒီလိုဖြစ်တော့မှာ ကျုပ်ကကြိုသိသားပဲ.. ထားလိုက်ဟေ့လူ သွားဝင်မပါနဲ့နော်.. ကိုယ့်အပူမပါဘူးဗျ။ ကိုယ့်ဟာကို နေတတ်သလိုလေးသာနေ”
ဒီစကားမျိုးတွေ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မကြာခဏ ကြားလာရတယ်။ ကိုယ်တိုင် ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်မိသားစုအရေးမှမဟုတ်ရင် သူများဘေးဒုက္ခရောက်နေတာကို အေးရာအေးကြောင်း ကြည့်နေနိုင်ကြတဲ့ လူတွေ… လူတွေ…။ ခုနက မြင်းကျားလို လူတွေ အများကြီးရှိနေကြတယ်.. ဒီနေရာမှာ လူတိုင်း ကြားဖူးတဲ့ပုံပြင်လေး ပြန်နွှေးချင်ပါတယ်.။
တောထဲမှာ လူနှစ်ယောက်ကို ဆင်ရိုင်းကြီးကလိုက်တယ်ပေါ့.။ လူနှစ်ယောက်က ထွက်ပြေးရတာပေါ့.. လူတစ်ယောက်ကပြောတယ်.. ငါတို့ဆင်ရိုင်းထက် ပိုအပြေးသန်နိုင် ပါ့မလား..
ဟိုလူကဖြေတယ်. “ဆင်ရိုင်းထက်တော့ မသိဘူး.. ငါမင်းထက်တော့ ပိုအပြေးသန်တယ်”..တဲ့ သိပ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ပုံပြင်ပါ.. မင်းထက်တော့ ငါပိုအပြေးသန်တယ်.. မင်းသေချင်သေပါစေ.. ငါလွတ်ဖို့သာ အဓိကဆိုတဲ့ Mind set မျိုးကို (ဝမ်းနည်းဖွယ်ကောင်းတာက) လူငယ်တစ်ချို့ဆီမှာပါ အမြစ်တွယ် စပြုလာတာကို တွေ့လာရတယ်..။
သက်ငယ် မုဒိန်းမှုတွေ လူငယ်နဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးပြဿနာတွေအစားအစာနဲ့ ဓာတုဆေးဝါး ဆိုင်ရာရောဂါတွေ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံထဲက ပြည်တွင်းစစ်တွေ နိမ့်ကျနေဆဲ ပညာရေး ကျန်းမာရေး စနစ်တွေ…
ကိုယ့်ဆီ ကိုယ့်မိသားစုဆီ တိုက်ရိုက်မထိခိုက်သေးဘူးဆိုပြီး ကျွန်တော်တို့ အေးအေးလူလူ လုပ်နေကြတယ်..။မနက်အိပ်ရာနိုး Breakfast စားပြီးရင်
ငါအဆင်ပြေဖို့အတွက်ပဲ ရှင်သန်နေကြသူတွေ.သူများတွေ ဘာဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ ခံယူထားတဲ့ လူတွေ ခုနောက်ပိုင်းမှာ အရမ်းကို များလာတယ်..။ ဟိုးယခင် ကျွန်တော်တ်ို့နိုင်ငံ မဆလ ခေတ်က သိပ်တွင်ကျယ်တဲ့ စကားတစ်လုံးရှိခဲ့တယ်.
“ဦးရာလူ” တဲ့… (အဲ့ဒီစကားလုံးကို ယခုလက်ရှိအချိန်အထိ ကျွန်တော်မုန်းတယ်)
ဦးရာလူ…ဦးတဲ့သူ ရမယ်နောက်ကျရင် မရဘူး.. အဲ့ဒီအချိန်ကအစစ အရာရာ ရှားပါးတဲ့ခေတ်ဆိုတော့ လူတွေဟာ ဦးရာလူ စနစ်ကြောင့် ကုန်တိုက်တွေမှာ သူများထက်ကိုယ် ဦးအောင်တန်းစီပြီးဈေးဝယ်ရတယ်.။ နောက်ကျခဲ့ရင်မရတော့ဘူး..သူများရသွားလိမ့်မယ်။
ကိုယ်က သူ့ထက်ဦးမှကို ရမယ်ဆိုတဲ့ အရိုးစွဲစိတ်ဓာတ် နဲ့ကြီးပြင်းလာရလို့များ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာပင်ကိုယ်က သိမ်မွေ့ပါလျက်နဲ့ ကိုယ်ချင်းစာတရားတွေ ပါးပါးလာကြပြီး ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက် လဲရောက်ရော မြင်းကျားလိုလူမျိုးတွေ များပြားလာရသလား ရယ်လို့ တစ်ခါတစ်ခါ လျှောက်တွေးမိတယ်..။
တိရစ္ဆာန်လိုမျိုး အရိုင်းစိတ်တွေ စိုးမိုးအားကောင်းလာတဲ့ခေတ်ဆိုတော့ ကားခြင်း ပွတ်မိယုံရုံနဲ့လည်း သံတုတ်ကိုင်ပြီး ရိုက်ကြနှက်ကြ..လူခြင်း စကားများရုံလောက် နဲ့လည်း သတ်ကြ ဖြတ်ကြနဲ့ပေါ့..။
ပလက်ဖောင်းကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲ လမ်းလျောက်လာရင်း ထိပ်တိုက်တွေ့တဲ့အခါ ကိုယ်လေးယို့ပြီး ရှောင်ပေးဖို့တောင် ခဲယဉ်းလာတဲ့အထိ လူတစ်ချို့ အတ္တကြီးလာကြ တယ်.။ ကမ္ဘာတောင် မီးမလောင်သေးပါဘဲနဲ့ မိတ်ဆွေရင်းတွေအချင်းချင်း ချနင်းဖို့ဝန်မလေးကြတော့ဘူး..။
လူနဲ့တိရစ္ဆာန်ကြားက ခြားနားချက်တွေ တဖြည်းဖြည်းကျဉ်းမြောင်းလာတာ တွေးကြည့်ရင် သိပ်ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ကိုယ့်ရင်ထဲမှာလည်း တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင် အကောင်ပေါက်နေပြီလားလို့ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် မကြာခဏ ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်မိတယ်။
တိရစ္ဆာန် နဲ့ လူ ခြားနားချက်ကို ဘာ စံ ၊ ဘာပေတံ နဲ့ ခင်ဗျားကတိုင်းမှာလဲလို့လာမေးရင်ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ်ချင်းစာတရားဆိုတဲ့ ပေတံနဲ့ပဲ တိုင်းချင်ပါတယ်..
“ကိုယ်ရဲ့ ကာယကံ ဝစီကံ မနောကံတည်းဟူသော အကြောင်းတရားတွေဟာ သူတပါးအပေါ်မှာ ထိခိုက်နစ်နာ သွားစေနိုင်သလား?” ဆိုတဲ့ခံစားချက်နဲ့
“သူ့နေရာမှာ ကိုယ်သာဆိုရင် ကိုယ်ဘယ်လို ဘယ်လိုခံစားရလိမ့်မလဲ?” ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးပါ လူပီသဖို့ဆိုတာ သိပ်အများကြီးမလိုပါဘူး။ ကိုယ်ချင်းစာတတ်ဖို့လေးပါ ။
အဲ့စိတ်ဓါတ်လေးမရှိရင်တော့အင်္ကျီဝတ်ထားပြီး အမြီးတနံ့နံ့နဲ့သွားနေတဲ့ မြင်းကျားတစ်ကောင်သို့သာ
သရုပျဆောငျ ‌ကြျောကြျောနန်ဒက ဝတျဆငျထားတဲ့ စိနျနားကပျကိုတောငျ ခြှတျပွီးလှူဒါနျးပေးလိုကျတဲ့ အကွောငျးကို အခုလိုပွောပွလာခဲ့………